မောင်မင်းဇော်: ဗယ်လင်တိုင်းနေ.မှာ ကဲမဲ. ညီမများ၊ မမများ အတွက်ပါ(spy camera)
ဗယ်လင်တိုင်းနေ.မှာ ကဲမဲ. ညီမများ၊ မမများ အတွက်ပါ(spy camera)
မြည်မှာပေါ့ ကောင်လေးက အခန်းထဲမှာ ကင်မရာခိုးတပ်ပြီးသူတို့Love Scence လေးကို လျို့ဝှက်ရိုက်ကူးရေး လုပ်နေတာ အဲဒါကို ကောင်မလေး ဖုန်းထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့ Software လေးက ထောက်လှမ်းမိပြီး အချက်ပြ လိုက်တာပေါ့ဗျာ...
ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကဲချင်သူများ... မိသားစုနဲ့ အတူတူ ခရီးထွက်လည်ရင်း ဟော်တယ်မှာ တည်းတဲ့အခါ ကင်မရာရန် ကြောက်သူများ.. Shopping Center တွေမှာ Fitting Room မှာ ၀တ်အစား လဲတဲ့အခါ ကင်မရာရန် ကြောက်သူများ..
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးနဲ့ကူညီပါရစေ..ခင်ဗျား
ဆော့ဝဲလ်လေးအား မစသော အက်မင် Hein Thu အားလည်း ကျေးဇူးတင် ပါတယ် ။ အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ...
ရေးသားသူ flower lay at 18:31